ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको कुटपिटप्रति बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाउँदै यस्तो ट्विट गरे… हेर्नुहाेस् -
काठमाडौं । आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक अभियान्ता भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा भएको आ क्रमणप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । डा. भट्टराईले शाहीमाथि गरिएको आ क्रमणमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संलग्न रहेको तर्फ संकेत गर्दै लोकतन्त्रमा भिन्न मत राख्नेलाई पि ट्न नमिल्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक सन्देश लेख्दै डा. भट्टराईले लोकतन्त्रमा प्रतिगामीलाई पनि विधिसम्मत ढंगले नियन्त्रण वा दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘हिजो मण्डलेले लोतन्त्रवादीलाई पिटे भनेर आज लोकतन्त्रवादीले भिन्न मत राख्नेलाई पि ट्न मिल्दैन ! लोकतन्त्रमा प्रतिगामीलाई पनि विधिसम्मत ढंगले नियन्त्रण वा दण्डित गर्नुपर्छ,’ डा. भट्टराईले ट्वीटर सन्देशमा भनेका छन्, ‘निरंकुशता÷फासिवाद र लोकतन्त्रबीचको मुख्य अन्तर यही हो ! के हाम्रा कमरेडहरु सामाजिक फासिवाददति अन्मुख भएकै हुन् ?’ डा. बाबुराम भट्टराइकाे ट्विट जस्ताको तस्तैः
हिजो मण्डलेले लोकतन्त्रवादीलाई पिटे भनेर आज लोकतन्त्रवादीले भिन्न मत राख्नेलाई पिट्न मिल्दैन! लोकतन्त्रमा प्रतिगामीलाई पनि विधिसम्मत ढंगले नियन्त्रण वा दण्डित गर्नुपर्छ! निरंकुशता/फासिवाद र लोकतन्त्र बीचको मुख्य अन्तर यही हो!के हाम्रा कमरेडहरू सामाजिक फासिवादतिर उन्मुख भएकै हुन्?
यो पनिः पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाइ आँधीखोलमा र्याफ्टिङको मजा
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेका बेला स्याङ्जाको वालिङका युवाहरूले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आँधीखोलामा पत्रकारलाईसमेत र्याफ्टिङ गराएका छन् । वाण्डरफुल वालिङ संस्थामा आबद्ध युवाहरूले संस्थामार्फत पर्यटन प्रर्वद्धनमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।
र्याफ्टिङ व्यवसायी तथा गाइडर सुभाष थापाले बर्खाको मौसममा अन्य नदीहरूमा पानीको बहाब बढी हुने भएकाले र्याफ्टिङ गर्न नपाइने तर आँधीखोलामा बर्खाको समयमा पानीको बहाबको मात्रा उपयुक्त हुने भएकाले बर्खाको तीन महिना साउनदेखि असोजसम्म सुरक्षित किसिमले र्याफ्टिङको मजा लिन सकिने बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरा घुम्न आउने पर्यटकले आँधीखोलामा र्याफ्टिङको मज्जा लिन सक्ने थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पोखराको नजिकै रहेको आँधीखोलामा राम्रोसँग प्रचारप्रसार गरेको खण्डमा जलयात्राको प्रचुर सम्भावना रहेको यो ठाउँ पर्यटकको आर्कषण गन्तव्य बन्न सक्छ ।’ भीरकोट नगरपालिका–१ हेलुदेखि वालिङ नगरपालिका–१३ बायेटारीसम्म करीब २५ किलोमिटरको जलयात्रालाई व्यवस्थित गर्न सके आँधीखोलामा र्याफ्टिङका माध्यमबाट रोजगारीका साथै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका माध्यमबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने वाण्डरफुल वालिङका सचिव गणेश राउतले बताए ।
त्यसैगरी ११ प्रतिशत मानिसहरुमा बाइपोलार डिसअर्डर हुने र ६ प्रतिशत डिप्रेशन र एक्लोपनाको शिकार हुने पनि पत्ता लगाइएको हो । यस्ता मानिसहरुमा अनिद्राको समस्या बढी भेटिने हुनाले नै उनीहरु राति सक्रिय हुने गर्छन् । त्यसकारण यिनीहरु मध्य रातमा मोबाइल चलाउने, चिया पकाउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको प्रमुख अध्ययनकर्ता ड्यानिअल स्मिथले बताएका हुन् । उनका अनुसार यस प्रकारका मानसिक रोगबाट बच्न १० बजे सम्मको समयसीमा तोक्न आवश्यक छ । मानिसहरुले त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल चलाउनमा रोक लगाए समस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ । विशेषगरी शहरमा चौबीसै घण्टा बत्तीको मुनि बस्ने मानिसहरुका लागि मोबाइलको अधिक प्रयोगले गम्भीर समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुस : ज्ञानेन्द्रलाई कुट्दा दिपक राजदेखि माग्नेले लेखे यस्तो स्टाट्स !
‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि निर्घात कुटपिट भएपछि समाजिक संजाल तातेको छ । भरतपुरस्थित चौविसकोठीमा ‘भष्ट्राचार, वेथिती र लुटतन्त्रको विरोधमा नागरिक खबरदारी’ सभा गर्न लाग्दा स्थानिय प्रशासनले नदिएपछि होटल फर्कने क्रममा गाडीमै शाहीमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रमणपछि अशक्त घाइते भएका ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा सामाजिक संजालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । ज्ञानेन्द्रमाथि आक्रमण भएपछि केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढाले ‘भ्रष्टाचारको बिरुद्ध बोल्नेलाई मुक्का । दुई तिहाईको उपहार केवल उखान टुक्का । लोकतन्त्रमा फरक मत’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैगरि, दिपक राज गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘आज पारसले पिटे, ज्ञानेन्द्र ले पिटाइ खाए । पहिलो घटनाले सबै खुशि, दोश्रो मा कोहि खुशि कोहि दुखि ।’
हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले ‘कुटपिट र अवरोधले ‘अभियानहरु’ सकिन्नन् कमरेड ! राजनैतिक र प्रशासानिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार उखेल्दिनुस् न, बिरोध र अराजकता आफैं बन्द हुन्छ नि । ज्ञानेद्र शाहीको प्रस्तुती र शैलीको बारेमा फरक मत होला । तर, उनको बिरोधमा बाहुबलको प्रयोग र प्रबेश निषेधको राजनीति गलत हो । प्रश्नहरुको जवाफ राम्रा कामले दिनुपर्छ, कुटपिट र अवरोध गरेर हैन । नत्र के फरक भयो र !’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्
सभालाई शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका अभियान्ताहरुले सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो । शाहीको टोली गाडीबाट आउने तयारीका लागि चौविसकोठीको होटल ग्लोबलमा मात्र के पुगेको थियो, युवाहरुको समूहले आक्रमण र्गयो । हाइस गाडीमाथि ढुंगामुढा भयो । हातमा ढुंगा, इट्टा तथा रड बोकेका युवाहरुले शाहीलाई लक्षित गरी अन्दाधुन्ध हानेको गाडीमा रहेकाहरु बताउँछन् । ‘ढुंगैढुंगाले हान्यो, रडले समेत हाने’ गाडीमा रहेका एकले भनेका छन् ।
प्रकाशित मिति १३ आश्विन २०७६, सोमबार १५:१४